WikiLeaks haichakwanise kushandisa iyo Coinbase account | Gadget nhau
Coinbase anovharira WikiLeaks account
Eder Esteban | | Cryptocurrencies, Noticias
Kudzorera kukuru kutsva kweWikiLeaks. Sezvo account yavanayo muCoibase yakavharwa. Sarudzo inomiririra dambudziko hombe rekubhadhara iyo webhusaiti. Uye izvo zvinogona kuunza zvakati wandei matambudziko epuratifomu. Chikonzero chekuvharira nekuvhara iyo account ndechekuti kambani inofanirwa kutevedzera mutemo weUnited States.
Kubva Dhipatimendi reHaimari muUnited States rinokumbira kuti hapana kambani ine bhizinesi rezvemari neWikiLeaks. Sezvo iyo yekupedzisira yakatsaurirwa kusefa yakawanda yakawanda ruzivo, zvese kubva kuhurumende nekumamiriri. Saka Coinbase yateedzera mutemo mutsva.
Sezvinotarisirwa, kana kukiya uku kwaitwa pamutemo, Julian Assange akadaidzira pasocial media kune vashandisi kuramwa Coinbase. Chikumbiro chinoita kunge hachina kana nemhedzisiro. Asi izvo zvinoratidza dambudziko hombe repuratifomu.
Kunyange, Kuvharira iyo WikiLeaks account hazvireve kuti vanomira kugamuchira kana kushandisa Bitcoin. Unogona kuenderera mberi nekushandisa iyo cryptocurrency mukuchinjisa papuratifomu usingazivikanwe. Dambudziko nderekuti, Coinbase yaive rubatsiro rwakakura mukurerutsa maitiro aya.
Iri ndiro rimwe dambudziko kuWikiLeaks, iyo yanga ichiedza marudzi ese emhinduro kwemakore kuti igone kuzvichengetedza uye kuzvipa mari pachayo. Kunyangwe vasiri vese vari kushanda zvakaenzana mushe. Kuuya kwemakristpto mari wave mukana kwavari, uyo unoratidzika kunge uri kuvashandira kusvika parizvino. Saizvozvo, Assange runyerekupe rwekuti ane huwandu hwakawanda hweBitcoin, zvekuti anogona kuve mamioneya.
Naizvozvo, ma cryptocurrencies anga ari iwo sosi yavo huru yemari munguva dzichangopfuura. Asi, kana Assange akachinja maBitcoins aya kuita mari, anoenda mumutemo wehurumende, izvo zvaari kuda kudzivirira. Tichaona kana WikiLeaks ichizivisa imwe nzira yemari mushure meiyi Coinbase blockade.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Noticias » Coinbase anovharira WikiLeaks account
Maitiro ekuziva kuti ndeapi maapplication anowana kune yako Google data
Mitambo ine Xbox Goridhe inoshamisika neMetal Gear Solid V: iyo Phantom Pain
Gamuchira nhau dzichangoburwa nezve tekinoroji uye komputa muemail yako